Parliament of Zimbabwe gets full ISO certification - ZBC NEWS
THE Parliament of Zimbabwe has become the first legislature in the world to get full International Standards Organisation – ISO certification, in what is a giant step towards its quest for excellence.
The issuance of an ISO certification to the Parliament of Zimbabwe comes after successful transition from the 2008 standards of service delivery to 2015 standards.
This was confirmed by the Representative of Quality Management Systems of Parliament, Mr Nesbert Samu on the sidelines of a quality management systems capacity building for the Parliament of Zimbabwe in Bulawayo this Monday.
“The parliament of Zimbabwe is the only parliament in the World which is ISO certified under the 9001:2015. Other parliaments have got departments which are ISO certified, but as a whole administration the parliament of Zimbabwe is the only one and we are very proud of this standardisation,” said Mr Samu
The International Organisation for Standardisation (ISO) 9001:2015 is the most updated of its kind focusing on quality management systems and performance.
This standard has assisted Parliament of Zimbabwe to develop a management system that aligns quality with its institutional strategic plan (2018-2023).